बाहुन – क्षेत्री नै हुन त दलितको दुश्मन ? – Kantipur Press
नविन विक/चीन ,रुकुम चौरजहारीको सामुहिक हत्याले मानब इतिहासमा कलंकको एउटा कालो गाढा र ठुलो धब्बा लगाईदिएको छ । ती हत्याराहरुले क्रुरताका सबै पराकाष्ठा पार गरेका छन । जस्तो सुकै गल्ती भएनी मान्छे मार्ने प्रबृती राम्रो होईन, मान्छे मारेर पनि कार्वाही भएन भने भोली यस्ले बिकराल रुप लिनेछ । यो प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ नत्र भोली तपाई हामी जो कोही पनि यस्तै घटनाको शिकार हुनुपर्छ। त्यसैले हत्या र हिंसा कुनै पनि कोणबाट सहि हुन सक्दैन, दोषीलाई कार्वाही हुनै पर्छ।
रुकुम चौरजहारीको घटनामा नवराज बिश्वकर्मा भएर मात्रै मारिएका होईनन, उनी गरिब र पारिवारिक हैसियत राम्रो नभएर नै अस्वीकार गरिएको हो । र त्यसै निहुँमा मनमुटाव बढ्दै गएर त्यो नरसंहार भएको हो । आज नवराज बिकको ठाउमा धनि हुनेखानी वा बिदेशी पिआर होल्डर बिश्वकर्मा, परियार वा मिजारका छोरा भैदिएको भए त्यै मल्ल ठुकरीको परिवारले ख़ुशी ख़ुशी आफ्नो छोरी ती केटालाई कन्यादान गरिदिने थिए । र सगर्ब भन्ने थिए “ हामी जातभात मान्दैनौ, अहिलेको एक्काईसौ सताब्दीमा आएर पनि यस्तो अमानबिय कुरा गर्ने भनेर समाजमा अर्ती र उपदेश दिदै हिडिरहेका हुने थिए ।
हाम्रो परिवाको नातामा दुई जना भान्जीको पनि अन्तरजातिय बिबाह भएको छ ।चितवनकै एक जना भान्जी अमेरिकामा पढन गईन , पढाई सकिन । उतैकी आरएन नर्स भईन, मान्छे पनि राम्री कमाई पनि राम्रो अनि ज्वाईसाप चै नेपालमा हुनुहुन्थ्यो ।उनीहरु भौगोलिक रुपमा जति टाढा भए,माया उती गाढा हुदै गयो । यद्दपी उनीहरु स्कुल देखीकै साथी थिए, पछि भान्जी नेपाल आईन दुबै परिवारको सहमतिमा राम्रै सित बिहे भयो । दुबै तिरको परिवार र भान्जी ज्वाई दुबै जना लन्डनमा मस्तको जीबन बिताउदै छन, ज्वाई साप गौतम थरको बाउन हुनुहुन्छ।
अर्की भान्जी पनि आरएन नर्स हुन तर उनी अष्ट्रेलियाकी, एक जना नेवार केटाले औधी मन पराउने ,राम्री पनि उस्तै, भान्जीले उसको माया साँचों हो की हैन थाहा पाउन सकिनन । किनकी प्राय बिश्वकर्मा,परियार, मिजार हरुका चेलीलाई लव गरे पनि सजिलै बिहे गरेर भित्र्याईदैन । त्यसैले मलाई घर बाटै माग्न आउने भए मात्रै तिमी संग माया प्रेम गर्छु । बिहे गर्छु नत्र मेरो नजिक नआउ भनेसी, नेवार केटो बाउ आमा मनाएर पञ्चेबाजा बजाएर जन्ति लिएरै आएर बेहुलि लिएर गए । आज उनीहरु अष्ट्रेलियामा सुखी जिबन बिताई रहेका छन।दुबै घटना चितवनको हो, आफु शिक्षित र सक्षम भएमा कसैले जात हेर्दैन भन्ने यो एउटा राम्रो उदारहण हो ।नेवार केटो बाउ आमा मनाएर पञ्चेबाजा बजाएर जन्ति लिएरै आएर बेहुलि लिएर गए
सबैले कोटा ( आरक्षण) कुरा गर्छन, यो नभई दलितको भबिस्य छैन,दलित मासिन्छन जस्तो तर्क गर्छन तर रिमा बिश्वकर्मा कुन कोटामा परेर प्रसिद्ध नायिका तथा एन्कर भएकी हुन? उनी आफ्नो प्रतिभा र कडा मिहेनेतले गर्दा आजको यो ठाउमा पुगेकी हुन, कमीनी भनेर उनको कार्यक्रम नै बहिस्कार गर्नु पर्ने होईन र ? उनी त मार्केटबाटै आउट हुनु पर्ने होईन र? तर उनको डीमान्ड राम्रो छ, नेपालको ठुला ठुला रियालिटी शो उनैल् होस्ट गर्छिन ।यस कुमारको पनि कति धेरै फ्यान छन, उनको गीत न आउ मेरो सामु तिमी, मैले छोएको पानी चल्दैन भन्दा गीत क्षेत्री बाउन हरुले पनि रमाई रमाई सुने, कुलेन्द्र बिश्वकर्मा ( सालको पात टपरी हुने नहुने सल्लैको) कति हिट भयो, सबैले कुनै भेदभाव नगरी सुने , राजु परियार, झलकमान गन्धर्ब, पुर्णकला बिसी, प्रकाश सपुत यीनीहरुको गीत सबै फ्लप हुनु पर्ने होईन र? त्यस्तो भेदभाव गर्ने भए कसैले पनि तिनका गीतहरु सुन्न नपर्ने हैन र ? रबि ओड कसरी नेपाल आईडल भए ? प्रताप दास? नेपाली डान्स च्यामपियन शो बुगी वुगीको बिजेता कबिता नेपाली लाई कस्ले बिजेता बनायो? कसरी बिजेता बनिन,’?नेपालकै पहिलो बि ब्वाईङ गर्ल आश्मा बिश्वकर्मा कसरी नेपालकै नम्बर वान बनिन? सोमपाल कामी लाई बाहुनले टिकाटाला गरेरै छोरी दिए र क्रिकेटमा लाखौ फ्यान छन, यी सबै घटनालाई बिचार गरेर म के निष्कर्षों पुगे भने जब तपाई संग दम( ट्यालेन्ट) दाम र नाम हुन्छ भने कोही पनि दलित हुदैन, कसैले पनि तपाईलाई बिभेद गर्दैन, दम,नाम र दाम भएन भने बाहुन नै भए पनि उ दलित हुन्छ। मैले मेरो घर र अफिसमा (चीनमा) धेरै जना गैर दलित समुदायको महिला तथा पुरुष लाई मेरो घरमा सहयोगी बनाएर काममा लगाएँको छु, त्यसैले म भन्छु दलित कुनै जात होईन, यो त मानिसको एक अवस्था हो।
मैले छोएको पानी चल्दैन भन्दा गीत क्षेत्री बाउन हरुले पनि रमाई रमाई सुने
दलित भएर नै हामीलाई दबाए भन्नु चै जायज हुदैन किनकी दबाउने, पेल्ने, खुट्टा तान्ने र लडाउने त मानिसको प्रबृति नै हो । एनआरएनएको चुनाबमा लन्डनको बाउन दाजु कुल आचार्य र जर्मनको बाउन अहिलेको हाम्रो अध्यक्ष कुमार पन्त बिच काठमाडौको हायत होटलमा घमसान भयो । अन्तमा कुल आचार्य दाई झिनो मतले हार्नुभयो , कुल दाईलाई लडाउन सक्रियहरु कुन समुदायका थिए? अब हेर्नुस केपी ओलीलाई बारम्बार लडाउन खोज्ने कुन समुदायको छ? पुरै क्षेत्री बाहुन समुदायको नेताहरु नै लागी परेका छन, बाबुराम भट्टराईको खोईरो खन्नेहरु कुन समुदायका छन? गिरिजा प्रसाद कोईराला गणतन्त्र मुलुक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने उनको अन्तिम इच्छामा बाधक बन्ने मुख्य पात्र बाहुन प्रचण्ड नै थिए । चितवनको मेयरको उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई पनि क्षेत्री बाउनहरुले नै मिलेर मत पत्र च्यातेर अर्का बाउन देवी ज्ञवालीलाई हराएरै छोडे, धुरु धुरु रुने बनाए । अब बामदेबकै कुरा गरौ, चुनाबमा अन्तरघात गरेर हराउने र उनको राजनीतिक क्यारिएर सिध्याउने कुन समुदायका हुन? सबै उनकै क्षेत्री बाहुन साथीहरु नै होईनन? यी माथिका पात्रहरुमा एउटा मात्र दलित पात्र हुन्थ्यो भनी दलित भएको हुनाले यसरी पेलीयो, हेपियो, फालियो भनेर कत्रो रडाको मचिन्थ्यो होला, त्यो कल्पना गर्न पनि सक्दिन । त्यसैले मानिस मानिस बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा एक अर्कालाई दबाईन्छ, लड़ाईन्छ, यसकुरालाई हामीले जति छिटो बुझ्छौ । त्यती नै धेरै सुखी हुन्छौ, जातलाई होईन मान्छेलाई दबाईन्छ तर हामी आफ्नो कमी कमजोरीलाई जातीयताको नाम दिन्छौ।
जातलाई होईन मान्छेलाई दबाईन्छ तर हामी आफ्नो कमी कमजोरीलाई जातीयताको नाम दिन्छौ
बर्षै पिच्छे सरकारले राज्यका बिभिन्न अंगमा हजारौ कर्मचारी माँगेका हुन्छन, प्रहरीमा, आर्मीमा, सिभिल सर्विस लोकसेवामा तर हाम्रो दलित समुदायका कति जनाले परीक्षा दिन्छन ? पहिला टुप्पी कसेर पढनु पर्यो, आफु त्यो लायकको हुनुपनी पर्यो , कापी जाच्नेलाई कस्को कापी जाँचीरहेको छु त्यो थाहा हुदैन कुन जातको भनेर पनि थाहा हुदैन । अनी जाँचकीले कसरी भेदभाव गर्छ?अब बाउनहरु टुप्पीकसेर पढेर सरकारी जागीर खान्छु भनेर त्यसै अनुरूप तयारी गरेर त्यो जागीर पाए भने कसलै रिस गरेर हुन्छ? क्षेत्री बाहुनले कब्जा गरे भनेर हुन्छ? कब्जा गर्न हामी पनि गए हुन्छनी , कस्ले छेक्छ? न संबिधानले न क्षेत्री बाहुनले , दलित समुदायमा पनि राम्रो संग पढेकाहरु सिडीयो, स्थानीय बिकास अधिकारी , प्रहरी डिएस,एसपी,आर्मीमा मेजर सम्म भएर सेवा दिने पनि छन। डाक्टर नर्स, शिक्षकहरु पनि तेत्तिकै छन, त्यसैले तपाई सक्षम हुनुभयो भने तपाईलाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन।
अनी जाँचकीले कसरी भेदभाव गर्छ
गुलाब पनि काँडै काँडाको बिचमा फुलेको हुन्छ । कमल पनि हिलोमा फुलेको हुन्छ । कहा छैन चुनौती? लाली गुरास पनि भिरमा फुलेको हुन्छ, आफ्नो अस्तित्व र पहिचान आफैले बनाउने हो । सबै भन्दा पहिला आफुले आफुलाई म दलित हु, म अछुत हु भन्ने भावनालाई आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार गरिदिनुस, कडा मिहेनत गर्नुस र सफल हुनुस, तपाईको सफलता र मिहिनेतको अगाडी यो छुवाछुत पनी निरीह बन्नेछ ।सयौ बर्षदेखी जरो गाडीएको प्रथा हो छुवाछुत, एकाध दुवाध घटनाले गर्दा हामीले सम्पूर्ण गैर दलित साथीहरुलाई बिशेष गरी क्षेत्री बाउन साथीहरुराई दोष लाउनु अन्याय हुन्छ । दस जनाले तपाईलाई अपमान गरे भने ९० जनाले तपाईलाई सपोर्ट र माया पनि गरेका हुन्छन । त्यसैले सधै जातका कुरा गरेर समाजमा बिखण्डन ननिम्त्याउ र सामाजिक सदभाव नबिगारौ । यसरी जातकै कुरा गरेर अघि बढेमा स्थिति झन जटिल र उग्र बन्नेछ।
दस जनाले तपाईलाई अपमान गरे भने ९० जनाले तपाईलाई सपोर्ट र माया पनि गरेका हुन्छन
अब कुरा गरौ बिहेबारीको , यदि आर्थिक स्थिति र पढ़ाई राम्रो छैन भने क्षेत्री बाउनले नै क्षेत्री बाउनलाई पनि छोरी दिदैन । धनी बाउनले गरिब बाउनलाई पनि चेपेकै हुन्छ हेपेकै हुन्छ । हेप्नु र चेप्नु मानिसको आर्थिक र सामाजिक हैसियत अनुसार बढ्दै जानी एक प्रबृति र गुण हो । यो जुन सुकै जातमा पनी लागु हुन्छ ।त्यसैले हामीले जे कुरामा पनि जातकै कुरा मिसाउनु हुदैन, तपाई एक छिन आँखा चिम्म गरेर सोच्नुस त तपाईको जीबनमा क्षेत्री बाहुन वा गैर दलित साथीहरुको कती देन छ? हाम्रो जीबनमा धेरै क्षेत्री बाहुन वा गैर दलित साथीहरुले धेरै ठुलो भुमीका खेलेका हुन्छन ।मेरो कुरा गर्नु हुन्छ भने मैलै ईमान्दार साथ भन्नुपर्छ, मलाई जे पर्दा पनि मैले सबैभन्दा पहिला गुहार्ने भनेकै मेरा क्षेत्री बाहुन लगायतका अरु गैरदलित साथीहरु हुन र मलाई उनीहरुले आफ्नो ज्यान समेत दिन पछि पर्दैन । को संग कसरी र कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो त्यो तपाई आफुमा भरपर्छ जातमा हैन । तपाईहरुले गरेको ब्यबसायमा कति प्रतिशत आफ्नो दलित समुदायको ग्राहक छन र कति प्रतिशत गैर दलित छन? आँकड़ा निकाल्ने हो भने १०% दलित र ९० प्रतिशत गैर दलित निक्लने छ, यसरी जातिय भेदभाव गर्ने भए दलितहरु कुनै पनि ब्यबसायमा सफल हुदैनथे।
तपाई एक छिन आँखा चिम्म गरेर सोच्नुस त तपाईको जीबनमा क्षेत्री बाहुन वा गैर दलित साथीहरुको कती देन छ?
मेरा सम्पूर्ण आफुलाई दलित भनेर चिनाउन रुचाउने साथीहरु, अब दलित भएर होईन, मान्छे भएर बाँचेर हेर्नुस । दलित शब्द संबिधानबाटै हटाउनु पर्छ । गर्ब साथ बिश्वकर्मा, परियार, मिजार भएर जिन्दगी जिउनुस, ९% आरक्षणमा नरमाउनुस, मिहिनेत गरौ र १००% कोटा नै हामीले हाम्रो समुदायले कब्जा गरौ। कस्ले रोक्छ? कोटा र आरक्षण भनेको अमेरिकामा दिईने फुड स्टम्प जस्तै हो । त्यो फुड स्टाम्प खान पल्किएकाहरु जीबनमा कहिल्यै प्रगति गर्दैनन । यसको लाभ धेरै जसो कालासमुदायका नागरिकले लिन्छन र उनीहरुको स्थिति सधै दयनीय नै रहन्छ। यसरी दया र माया गरेर दिईएको कोटाले हाम्रो समुदायको कहिल्यै उनन्ती र प्रगति हुदैन। म एनआरएनएको केन्द्रीय सदस्यमा छु, म कुनै कोटा बाट हैन धुरन्धर बाउन साथीहरु संग लडेर भिडेरै जितेर आएको हु । त्यसैले पहिला आफै सक्षम हुनुपर्छ । त्यसैले बरु शिक्षामा जोड दिऔ । साक्षरता बढाऔ, खुल्ला प्रतिस्पर्धा बाट धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई सरकारी उच्च निकायमा भर्ना हुने बातावरण बनाउ । तर आफु खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर अघि जान डराउने , हामी आफु चै केही पनि नगर्ने, मिहिनेत नगर्ने अनि दोष चै सबै क्षेत्री बाहुनलाई दिएर ९% आरक्षणमा रमाएर दलित समुदायको उत्थान र बिभेद हट्छ भन्ने सोच्नु भनेको बयल गाडामा अमेरिका पुग्छु भने जस्तै हो।
(लेखक चीनबाट एनआरएनएको केन्द्रीय सदस्य तथा भ्रष्टचार बिरुद्दको सामाजिक अभियन्ता पनि हुन)
सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु लाई कोरिया बाट खुल्ला पत्र ,नेपालका नदिमा अझै कति दलितले रगत बगाउनु पर्ने ?
विकास अर्को वर्ष गरौंला, अहिले नागरिकको जीवन रक्षा गरौं